"Valemidin": imibono mayelana izidakamizwa. on isicelo "Valemidina 'ukufundisa futhi impendulo ku ukukhinyabezeka kwayo
Life yomuntu yesimanje ugcwele ukucindezeleka, ukukhathazeka kanye nomuzwa ukutubeka, nakho, kubandakanya ukuthuthukiswa neurosis nokuqwasha.
Ukuze kuliwe kuwukubonakaliswa lezi uthi isifo, ezokwelapha zesimanje inikeza ngamathuluzi amaningi ngempumelelo. Omunye wabo umuthi "Valemidin".
Ukubuyekeza, intengo ithuluzi, futhi kuzoxoxwa ngakho esihlokweni lanamuhla.
Ukwakheka "Valemidin" amathonsi
Utshwala lehla izindlela umbala ogqamile noma aphuzi ansundu ehlangana. Izidakamizwa "Valemidin", okwakhiwa kwalo kuboniswa tincture valerian, izithelo hawthorn, imbiza Leonurus, amahlamvu of peppermint futhi diphenhydramine (diphenhydramine), uhlukile.
Njengoba izenzo izidakamizwa
Isenzo Ichaza amathuluzi ngenxa ithonya bathole ezinye zezici zalo emzimbeni wesiguli.
Valerian, ingxenye droplet, kunciphisa excitability we isimiso sezinzwa esiyinhloko, normalizes kwegazi yenhliziyo, ngaphandle kokudala ukuluthwa nesasasa.
motherwort imbiza anezakhi sine ekuthuthukiseni kwenhliziyo nokukhuphula ngamandla Kufinyeta inhliziyo. Ngenxa yalokho, umphumela hypotensive siyenzeka (encishisiwe blood pressure).
Peppermint iqukethe mayelana 1% amafutha abalulekile, kuhlanganise menthol futhi. Le into anezakhi antispasmodic futhi sine.
tincture Hawthorn kusiza ukunwetshwa izitsha yenhliziyo nezitsha palsy, okuvumela ukusetshenziswa ekwakhiweni echazwe ngokuthuthukisa umoya-mpilo umncane sezinzwa nobuchopho.
Izingxenye lehla "Valemidin" Izibuyekezo kuzoxoxwa ngezansi, uxhumana nomunye, ukwandisa umphumela zokwelapha jikelele. Ngoba umuthi fitotrankvilizatorom, ke akakubangeli imiphumela emibi, uma efanayo zokwenziwa izindlela.
Amathonsi "Valemidin" ezakhiwa esikhundleni izidakamizwa "valokardin", "korvalola" nezinye izidakamizwa, kuhlanganisa phenobarbital.
Ngenxa yokuthi wathi ketshezi kuyinto izidakamizwa ezinamandla, okwakhiwa kwalo iyingxenye, ngenxa ukusetshenziswa isikhathi eside zibulale isimo lesiguli, okuholela ekugcineni ukuvela kokuthikamezeka kanye nobuhlungu, kwehle inkumbulo futhi okubangela ukuba umlutha. Ngokuqhubekayo ukuthatha izimali ezingenhla ingaholela ngisho nasekukholelweni ukuthi ukwephulwa psyche lesiguli.
Ngaphezu kwalokho, ukuqedwa imithi nge phenobarbital sihamba kanzima, okuwenza isimo nokukhathazeka, ukwesaba nokucindezeleka. Into enjalo siyenzeka ngesikhatsi ukwelashwa lehla "Valemidin". ochwepheshe lezivakashi uqinisekise lesi.
Umuthi iye emtholampilo ihlolwe futhi wathola iphephile futhi isebenza ngempumelelo ezihlukahlukene iziyaluyalu isimiso sezinzwa.
Izidakamizwa "Valemidin": yokusetshenziswa, ngempela
Ngokusho eziningi Izibuyekezo iziguli nodokotela, izidakamizwa "Valemidin" unethonya omnene phezu CNS, has a sine nomphumela spasmolytic. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi izidakamizwa akakubangeli imiphumela anobuthi ku esimiso senhliziyo nemithambo yegazi kanye akusho ukukhiqiza sezidakamizwa.
It ezinqunyiwe at dystonia neurocirculatory, eligeleza nomfutho wegazi ophezulu uhlobo, ukuqwasha obuhlukahlukene kanzima ubuhlungu inhliziyo esifundeni etymology ezahlukene, neurosis, kanye uthi yokukhathazeka excitation. Amathonsi "Valemidin" ukusiza ekuvuseleleni izindawo umuzwa ezolile futhi singanqotshwa ukucindezeleka, ukukhathazeka, ukubuyisela ubuthongo umsindo futhi kujwayeleke blood pressure.
Nokho lokhu imithi akufanele isetshenziswe ulondekile, ngaphandle kokukhuluma nodokotela, ngoba kukhona imithi kanye contraindications.
Njengoba lisetshenziswe izidakamizwa "Valemidin"
Kuchazwe sine iqondiswa ngomlomo, pre-buhlanjululwe in nomqulu omncane wamanzi. I umthamo wansuku zonke abadala 30 kuya 40 amaconsi kathathu noma kane ngosuku. Inkambo yokwelashwa hhayi ningi than izinsuku eziyishumi nanhlanu. A re kokuthatha lesi izidakamizwa kuphela izincomo udokotela, ngemva kwamasonto ngaphambili kuka eziyisithupha inkambo odlule.
Kufanele ikhumbule yokuthi amathonsi reception ukuchitha isigamu sehora ngaphambi kokudla.
Izimo for ukwelashwa izidakamizwa
on isicelo "Valemidina" imfundo njengoba sine ukhumbula ukuthi kwezinye izimo kubalulekile ukuba siqaphele noma ukulishiya ngokuphelele ukwelashwa:
e hypersensitivity kuya nabavoti ekulungisweni;
iziguli abaye babonisa isibindi womuntu kanye nokusebenza kwezinso;
ngesikhathi ongaphakeme (kufika ku-55 amabhithi / imiz.), kwenhliziyo (bradycardia);
oyingozi noma ezingamahlalakhona ukuhluleka kwenhliziyo;
kanye izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18 (ngenxa yokuthi ukuthi ukuphepha nokusebenza ngempumelelo yaleli qembu lobudala engakaze wafunda).
Amaconsi kuthiwa contraindicated abesifazane abakhulelwe ngesikhathi lactation.
Overdose futhi side effects zomuthi
Kwezokwelapha, akukho imithi ngokuphelele ephephile. Bonke kungaba yingozi ngenxa ukweqisa izidakamizwa, noma ukuthola nomthelela ongemuhle umzimba wesiguli. Ngakho-ke, uma izimpawu ezingalindelekile ukuthi ujwayelana ngokuthatha izidakamizwa, kumelwe uyeke ukwelashwa kanye ngokushesha uxhumane nodokotela wakho.
Ezimweni Overdose echazwe sine hhayi kuchazwe.
Njengoba i- side effect, "Valemidin" izidakamizwa nokubuyekezwa ukusetshenziswa okuyinto izincwadi esizifundayo, ochwepheshe ukhombe Ezimweni ezingavamile ukubukeka dyspepsia (lokhu mkhuba kubangelwa ukukhiqizwa enganele ama-enzyme kanye ngenxa ukuqunjelwa). Futhi okuvela ezomile umlomo emizweni ukuphatha njalo izidakamizwa.
It kwaphawulwa nokungezwani komzimba uma sisebenzisa amathonsi.
isiqondiso Ahlala Kuyo ukusetshenziswa "Valemidin" amathonsi
Kumele kukhunjulwe ukuthi ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa kungenzeka tincture ingaphazamisi kanye nokulahlekelwa inzika zemvelo.
Akubalulekile ukwandisa umthamo zomuthi bebodwa - lokhu kungaholela umuzwa ukuphumula, ukucobeka futhi ukozela, nakho kuthinta ukusebenza.
Ngenxa yokuthi amathonsi aqukethe ethanol futhi diphenhydramine, lapho lusetshenziswa kufanele uyeke imisebenzi kulabo imisebenzi ezidinga okuhlushwa, futhi izimpendulo okusheshayo engqondo motor, ikakhulukazi kusukela ukuphathwa komgwaqo futhi usebenza imisebenzi eziyingozi.
Njengoba izidakamizwa baxhumana nezinye izidakamizwa
Ukusetshenziswa "Valemidina" imfundo icacisa ukuthi ejenti lapho zaphathwa nezinye izidakamizwa, CNS ezicindezelayo operation (ezifana isib hypnotics, sedatives futhi neuroleptics) kungaba ngcono umphumela ithonya mutual.
izindlela Kuhlanganiswe "Valemidin": Intengo
Izibuyekezo ochwepheshe kanye abathengi sedatives akhayo ngenhla. Leli thuluzi is kabanzi kwezokwelapha futhi kuye kwaba nomphumela omuhle ku isimiso sezinzwa iziguli. leyinye yemiphumela zomuthi Kwakuseshwa therapy, nezenhliziyo, Neurology, Gastroenterology ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane: Bethuka bonke yimpumelelo.
Okwamanje, kungenziwa amathonsi uthenge ngaphandle kadokotela Pharmacy we Russian Federation. Bayakhululwa sebesemabhokisini oqukethe amnyama ingilazi ibhodlela noma weThrojani ibhodlela, nge isixazululo utshwala (volume of 25 ml, 50 ml no-100 ml) futhi imiyalelo enemininingwane ukusetshenziswa zomuthi. Intengo iphakethe kuchazwe indlela efakwe ngaphakathi ruble 115-150, kuya ngevolumu ibhodlela.
On sedatives lehla "Izibuyekezo Valemidin 'ikakhulukazi omuhle, ngezinye izikhathi ngomdlandla. Kodwa wonke umuntu kufanele siqondiswe hhayi kuphela Council iphathwa ngokuphumelelayo izihlobo noma abangane enkulu ekukhethweni kuka-izidakamizwa. Khumbula ukuthi asabela ngayo yonke imithi isiguli kungenzeka ngokuphelele ngawodwana yini usizo olukhulu umngane wakhe, kungase kubangele ukugula okubuhlungu. Ngakho ungajahi zokuqala kudingekile ukuba baphuze imithi izandla! Sebenzisa imithi kuphela kokubonisana udokotela, futhi lapho Ukuwohloka lokuqala ngesikhathi ukwelashwa okhokhelwayo.
Musa engozini impilo yakho! Yiba nengqondo, qaphela!
Medicine "Trimetazidine". izinkomba
Umuthi 'Ampisid ". imfundo
Umuthi 'Sonapaks'. Yokusetshenziswa
Yuri Detochkin - Robin Hood yenkathi yamaSoviet